2008 - State-ka Minnesota oo 150 sano jirsan doono
Ayadoo la ogyahay in 2008 Indhaha caalamku soo wada eegi doono Minnesota haddii ilaahay idmo shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee ka dhici doona gobolka awgeed ayaa haddana Minnesota waxaa ay u diyaar garowoobaysaa xus ayada u gaar ah oo ah sanadguuradii ka soo wareegatay sanadkii Minnesota state noqotay 1858. Waxaana bilowday barnaamijyo lagu xusayo sanad guurada 150aad.
Taariikh kooban oof ku saabsan Minnesota USA
Waxaa deganaa gobolka qawniyadda Indian ah una badnaa qabiilka Dakota laakiin markii la soo gaaray 1840s waxaa soo batay cadaankii gobolka u soo guurayey taas oo keentay in madaxweynihii maraykanka ee markaas gobolka u soo diro nin cadaan ah oo la oran jirey Alexdandar Ramsey si uu heshiis ula galo qawmiyadda Dakota si dhul loogu helo cadaankii soo guurayey, Cadaankii ku noolaa Minnesota 1840 waxaa lagu qiyaasaa 6000 oo qof oo keliya laakiin markii la soo gaaray 1847 waxaa ay gaareen 150,000 oo qof taasoo keentay Minnesota loo aqoonsado Territory. Territory waxaa looga jeedaa dhul USA leedahay laakiin aan noqon karin state. Alexander Ramsey ayaa noqday governorkii ugu horeeyey ee Minnesota territory. Markii Minnesota noqotay state 1858 waxaa ku guulaystay inuu noqdo governorkii ugu horeeyey Henry Hastings Sibley oo ka tirsanaa xisbiga demoqraadiga.
Minnesota waxaa ku xoogbadnaa 1858 xisbiga demoqraadiga oo markaas aaminsanaa adoonsiga (Slavery) halka Jamhuuriga u doodayeen xuquuqda dadka madow. Khilaafka u dhaxeeyaa labada xisbi Minnesota waxaa uu gaarey in waqtigaas la kala qoro labo dastuur- midkii Jamhuuriga iyo midkii Demoqraadiga. Bilowgii qarniga labaatanaad (1900s) muhaajiriinta iman jirtay Minnesota ee qaadan jirey US Citizenship waxay u badnaayeen Scandanavian maanta 2007 muhaajiriinta qaadanaya jinsiyadda maraykanka waxaa u badan Minnesota Soomaali.
State-ka Minnesota waa state ugu Soomaali badan dhamaan United States of America. Waa state governorkiisa aqoonsaday Soomaali week June 26- July 2 . Waa state kii ugu horeeyey ee soo doorta Muslim Congressman – Waa state laga qiimeeyo codka Soomaalida. Soomaalida ayaa waxay ka mid noqdeen qoomiyadaha huwanta ee ku wada nool Minnesota ee xusaya 150 sano.
Maxmuud Nuur Wardheere
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 6, 2007
Daadka Qado Sharafyada Siyaasadeed ee Baydhabo
Daadka Qado sharafyo siyaasadeed oo is daba joog ah oo ay ku maashoonayaan Xildhibaanada Baarlamaanka... Akhri...